Iindaba - I-Shanghai MEOKON 2020 "Iintliziyo ezixineneyo ziyahlangana zenza amandla, Hlaziya kwaye usebenze" Isebe lezentengiso Imisebenzi yokwakha iqela ekwindla
I-Shanghai MEOKON 2020 "Iintliziyo ezixineneyo ziyahlangana zenza amandla okuqaqamba, ukuYila kunye nokuLwela" imisebenzi yeSebe yokuThengisa imisebenzi yokwakha iqela.
Ukulungiselela ukuphucula ubumbano lweqela, unxibelelwano nentsebenziswano; ukuphucula ukuqonda kolwazi ngentsebenziswano esebenzayo kunye nezakhono zonxibelelwano, ukukhuthaza amalungu eqela ukuba ajongane nomceli mngeni, azigqobhoze kubo, anokubakho amandla, kunye nokukhulula ukuthanda; Ukuqinisa inkcubeko yokudibana "UKUHLANGANA NGENTLIZIYO, KONG IN ACT" okwangoku, ukutyebisa ixesha labasebenzi. ISebe lokuThengisa laseShanghai Meokon labamba umsebenzi weqela leentsuku ezimbini ngoSeptemba 2020.
Nge-19 kaSeptemba, bonke abasebenzi beSebe lokuthengisa beza eSuzhou Taihu Sanshan Island, basungula umsebenzi wokwanda ekwindla kunye nomxholo othi "Iintliziyo ze-Coagulation ziyahlangana zenza i-brilliant, Innovate kunye ne-Strive". Lo msebenzi udlale indima entle ekuphuculeni ubumbano lweqela, Ukomeleza unxibelelwano kunye notshintshiselwano phakathi kwamalungu eqela kudlale indima entle ekukhuthazeni.
Emva kokugqiba ukuhamba ngebhayisikile ngovuyo kwesi siqithi, iqela lokwakha iqela laqala ngokusemthethweni. Emva koko, saqala ukhuphiswano lwentaba yokwehlisa intaba. Ngokwenkqubo yomqeqeshi, siqhube iPK ngexesha phakathi kwala maqela mabini. Ukuhla kweqhwa akubonisi kuphela amandla okunceda phakathi kwamalungu eqela, kodwa kukwanceda abantu ukuba bazigqobhoze ngcono; kukho ukusebenzisana kunye nokhuphiswano.
Ukuhamba ngebhayisikile ujikeleze isiqithi
UCliff ukhumbula kwakhona
Ukongeza kwithambeka lokunyuka kwentaba, sikwadlala neminye imidlalo yokhuphiswano lweqela- "iMijikelezo yoMlingo". Ngexesha lomdlalo, abanye abantu banoxanduva lokuzilolonga esizeni, abanye banoxanduva lokulungiselela amanyathelo okuphumeza, abanye banoxanduva lokukhumbuza amanyathelo okhuseleko, kwaye abanye banoxanduva lokuthatha imifanekiso kunye nevidiyo ... Zonke amakhonkco zenziwa ngocwangco kunye nendlela emnandi. Ekugqibeleni wathi umdlalo wagqitywa, amalungu eqela nawo akonyusa ukuthembana nokuqonda kwabo ngentsebenziswano.
Emva komdlalo, asinayo imivuzo kuphela kodwa sinezohlwayo.
Kukho isimanga kwimvulophu ebomvu
Ukuphela kwemidlalo yomdlalo wasemini, ngokuhlwa lixesha lethu lokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa, i-barbecue: i-skewers, ukudlala amakhadi, ukucula; ndikhululekile kwaye ndonwabile.
Emva kokugqiba imisebenzi yosuku lokuqala, safika kwiNtaba yaseTaihang kwiSiqithi saseSanshan ngosuku olulandelayo. Ngelixa sonwabela ubuhle bendalo, sikwa mamela nembali kunye nenkcubeko yeNtaba yeTaihang echazwe sisikhokelo.
Umsebenzi weentsuku ezimbini wokwakha iqela uphele ngokugqibeleleyo. Ukwakhiwa kweqela komeleze unxibelelwano notshintshiselwano phakathi koogxa, intsebenziswano phakathi kwesebe, kwangaxeshanye, ikwa ngamava okusebenza ngokubambisana.